मनाङ्गे नेकपा प्रवेशसँगै योगेश भट्टराईले जनाए आपत्ति « Khabarhub
मनाङ्गे नेकपा प्रवेशसँगै योगेश भट्टराईले जनाए आपत्ति
काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराईले राजिव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) नेकपामा प्रवेश गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै आपराधिक पृष्ठभूमिका मनाङ्गेलाई पार्टीमा प्रवेश गराएको आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले ट्वीटमा लेखेका छन्,‘राजनीतिक पार्टीलाई मान्छे त चाहिन्छ नै तर कस्ता मान्छे ल्यायौँ ? कस्ता कस्ता ल्याउँदै छौँ ? परिणाम के भैरहेको छ ? राम्ररी विचार गरौ है ?’
मनाङ ‘ख’ बाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद मनाङ्गे विहीबार नेकपामा प्रवेश गरेका हुन् । नवप्रवेशी सांसद मनाङ्गेलाई प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा नेकपा प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अबिर र माला लगाएर पार्टीमा भित्र्याएका हुन् ।
मनाङ्गे मनाङबाट स्वतन्त्र सांसदका रूपमा प्रदेशसभाका निर्वाचित भएका थिए । उनलाई तत्कालीन नेकपाको सहयोग थियो । केही समयअघि अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
मनाङ्गे नेकपा प्रवेश गरेसँगै गण्डकी प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति : १९ असार २०७६, बिहीबार ८ : ०७ बजे